Telescopic Aka Snow shọvel - China Richina
Ịdị No .: HT458
Collapse Ogologo: 1160 * 1560mm
Telescopic Aka Snow shọvel na-ghọtara maka àgwà, anwụ ngwa ngwa na fechaa. The Telescopic Snow shọvel na kemeghi aluminum aka kọmpat na gbatịrị ụdị 116-156cm, Always nri e mgbe ị kwesịrị ya. a snow shọvel na a nnukwu agụba nwere ike ikpochapụ snow rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ dị irè. a telescopic Snow shọvel na fechaa Ọdịdị-eme ka ọ obere na njem-enyi na enyi. -Enye gị ohere ịgbanwe ya elu welie mma. a telescopic Snow shọvel na-na a ala adịgide nke bụ ezigbo maka mma njikwa.
Plastic Snow Push shọvel na Kemeghi Aluminium emefu
ida ogologo 1160-1560mm
Snow shọvel na eyi blad, na aluminum mbepụ, agụba size 458 * 344mm
snow Pusher na ala D-udi adịgide
Snap-mkpọchi ejikọrọ maka snow shọvel blead na aluminum handle
Wave ọgịrịga imewe emesi agụba ike
-Achọ ezigbo Snow shọvel na Aluminium emefu Manufacturer & soplaya? Anyị nwere a dum nhọrọ nke na-ahịa na-enyere gị na-okike. All na telescopic Snow shọvel bụ àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke telescopic snow Pusher . Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Alu tube Snow shọvel
Car Plastic snow shọvel
Large Snow shọvel Pusher
Manual Snow shọvel
Push Snow igwu l koo angled
Push Snow shọvel na Wheels
Obere Snow shọvel
obere Snow shọvel N'ihi Car
Snow shọvel Cart
Snow shọvel ịṅụ Plastic
Snow shọvel Metal
snow shọvel wheel
snow shọvel wheeled
Snow shọvel na ụkwụ anọ
snow shọvel na Osisi emefu
Snow shọvel / Pusher
Snow shọvel N'ihi Snow mwepụ
Snow shọvel N'ihi Snow mwepụ Metal
Steel snow shọvel
-eje Ije Behind Snow shọvel
wheeled Snow shọvel
Wide Snow shọvel Pushers
Steel emefu poli Snow Scoop
Right-n'akuku Snow Pusher na Wheels
High Quality Alumin Snow / ọka Scoop shọvel
Kids Snow shọvel Non-Metal maka Kids Safe
Aluminum Snow Pusher na Wheels
Snow shọvel Tools na Ergonomic emefu